The Ab Presents Nepal » काहाली लाग्दो तथ्यांक साढे सात हजार युवा विदेशबाट बाकसमा फर्किए,सरकार यो कहिले सम्म ?
काहाली लाग्दो तथ्यांक साढे सात हजार युवा विदेशबाट बाकसमा फर्किए,सरकार यो कहिले सम्म ?
काठमाडौं-: सरकारी तथ्यांकअनुसार बितेको दश वर्षमा नेपालबाट काम खोज्दै ३८ लाख ५८ हजार ४६५ जना नेपाली युवा विदेसिए । त्यसमध्ये ७ हजार ३८४ जनाको जीवनलिला विदेशी भूमिमै समाप्त भयो ।अवैध बाटो भएर विदेश पुगेका र श्रम स्वीकृति नवीकरण नगरी बसेकामध्ये कतिले उतै ज्यान गुमाए भन्ने विवरण यो तथ्यांकले समेटेको छैनवैदेशिक रोजगार विभागकाअनुसार जति नेपाली विदेशिन्छन्, त्यही मात्रामा मृत्युदर घटबढ हुने सिलसिला चलिरहन्छ । तीन वर्षयता विदेशिनेको संख्या घट्दा मृत्युदर पनि घटेकै देखिन्छ ।
गएको १० वर्षमध्ये आव २०६६/०६७ मा सबभन्दा कम ४१९ जना नेपाली कामदारको मृत्यु विदेशमा भएको थियो । त्यो वर्ष विदेसिनेको संख्या दुई लाख ८४ हजार थियो । आव २०७१/०७२ मा सबभन्दा बढी एक हजार ६ जना नेपाली युवा बाकसमा फर्किए । त्यो आवमा पाँच लाख १२ हजार कामदार विदेसिएको तथ्यांक छ ।गत १० वर्षका बीचमा सबभन्दा धेरै पाँच लाख २७ हजार नेपाली आव २०७०/०७१ मा विदेसिएका थिए । त्यो वर्ष ८७७ जना कामदारले विदेशमै ज्यान गुमाए ।